नेकपाको विवादमा चीन र भारतको भूमिका « Online Sajha
यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि नेकपामा देखापरेको विवादमा चीन र भारत दुवैको चलखेल बढेर गएको छ । प्रथम दृष्टिमा यस्तो देखिन्छ कि नेपालको वा त्यसभित्र पनि एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादमा कुनै विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गर्नु सही होइन । तर उपरी र सामान्य रूपमा देखिने त्यस प्रकारको कुराका पछाडि जुन गम्भीरता र जटिलता छ, त्यसलाई पुरै उपेक्षा गर्न मिल्दैन । यो वास्तविकता हो कि आजको संसारमा कुनै पनि देशको राजनीति विशुद्ध रूपमा राष्ट्रिय हुँदैन र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्दछ । कुरा त्यति मात्र होइन, कुनै देशको राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावबाट पनि बच्न सक्दैन । त्यस विषयमा विचार गर्ने कुरा खाली यो मात्र हो स् त्यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल वा भूमिका कुनै देशको राष्ट्रिय हितको कति पक्षमा वा विपक्षमा छ ?
त्यसबारे एउटा अर्को कोणबाट पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ स् देशको राष्ट्रिय हित वा कुनै विदेशी शक्तिको भूमिकाबारे कुनै सर्वमान्य मत हुन मुस्किल पर्दछ र त्यसबारे विभिन्न राजनीतिक शक्तिका बेग्लाबेग्लै नीति र मान्यता हुन सक्दछन् । तर तिनीहरुका बीचमा पनि सही के हो ? त्यसलाई ठम्याउने हाम्रो प्रयत्न हुनु पर्दछ ।
देशका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना निहित स्वार्थ वा दृष्टिकोण अनुसार नै त्यो विवादलाई हेर्ने गरेका छन् । संसदको विघटन भयो । त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रसन्न राजावादीहरू छन् । उनीहरूले आशा गरेका छन्, संसदको विघटनले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्ने तथा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने उनीहरुको उद्देश्य पुरा गर्न मद्दत गर्नेछ । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना दलभित्र भएको अन्तरकलह र बेग्लाबेग्लै पक्षका बेग्लाबेग्लै दृष्टिकोण अनुसार नै संसदको विघटनलाई हेर्ने गरेको छ । त्यसको संस्थापन पक्षले संसदको विघटनलाई विरोध गरेपनि संसदको पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई रोक्ने नीति अपनाएको छ । त्यसका पछाडि के नियतले काम गरेको छ रु त्यो क्रमशः प्रष्ट हुँदै जानेछ । नेकपाभित्रको प्रतिपक्षले संसदको विघटनको विरोध गर्नुको साथै त्यसको पुनस्र्थापनाको पनि माग गर्ने नीति अपनाएको छ ।
विभिन्न वामपन्थी शक्तिहरूले पनि आफ्ना आफ्ना राजनीतिक मान्यता अनुसार नै त्यसप्रति आफ्नो दृष्टिकोण निश्चित गर्ने गरेका छन् । क्रान्तिकारी रणनीतिक कार्यक्रमलाई तात्कालिक नीतिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने पक्षहरूले विद्यमान गणतन्त्र वा संविधानलाई पुरै प्रतिक्रियावादी मान्दछन् । त्यसै गरेर उनीहरुले नेकपालाई पनि सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिको रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । त्यसैले विघटित संसदको पुनस्र्थापनामा उनीहरूले कुनै रुचि राख्दैनन् । तैपनि सामान्यतः उनीहरूमध्ये अधिकतरमा संसदको विघटन प्रतिगामी कदम हो भन्ने कुरामा सहमति पाइन्छ । तर कतिपय पक्षहरू त्यो हदसम्म पनि जान तयार छैनन् ।
देशको उपर्युक्त प्रकारको राजनीतिक स्थितिमा हाम्रो पार्टीको पनि संसदको विघटनबारे बेग्लै र स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ । हाम्रो यो धारणा रहेको थियो र अहिले पनि छ कि नेकपाभित्रको विवाद वा फुटबाट देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा कैयौ“ दुष्परिणाम हुने छन् । त्यसबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियता र राजनीतिक स्थिरता समेतमा गम्भीर आ“च पुग्ने छ । त्यसैले हामीले उनीहरूका बिचका विवादलाई विधिसम्मत तरिकाले हल गरेर उनीहरूको एकता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दि“दै आएका थियौ“ । संसदको विघटनपछि हामीले त्यो कदमलाई असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी भनेर विरोध गरेका छौ“ र ओली सरकारलाई दिएको समर्थनलाई फिर्ता लिएका छौँ ।
अहिलेको गणतन्त्र, संविधान वा संसदीय प्रणालीलाई समेत हामीले सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले स्वीकार गर्दैनौ“ । हाम्रो आधारभूत लक्ष्य तिनीहरुलाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादी गणतन्त्र ल्याउने नै हो ।
भारतीय शासकवर्गहरूको नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने नीतिलाई हामीले विरोध गर्दछौ“ । तर राजावादीहरूले भारतको त्यसप्रकारको भूमिकालाई स्वागत गर्दै आएका छन् र गर्ने छन् । ओली सरकारले नेपालप्रतिको अमेरिकाको एमसीसीको नीतिलाई समर्थन गरेको छ । तर हामीले अमेरिकाको त्यो नीतिको विरोध गरेका छौ“ ।मधेशवादीहरूले तराई वा संविधानप्रतिको भारतको नीतिको स्वागत गरिरहेका छन् । तर हामीले त्यसको विरोध गरिरहेका छौ“ ।
संविधानमा समावेश गरिएको सङ्घीयताप्रति पनि हाम्रो गम्भीर प्रकारको विरोध छ । तर हाम्रा उपर्युक्त प्रकारका भिन्नमतका वाबजुद हामीले तात्कालिक रुपमा विद्यमान संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई प्रगतिशील र सकारात्मक ठान्दछौ“ र तिनीहरु विरुद्धको प्रतिगामी आक्रमणको विरोध गर्दै तिनीहरूको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौ“ । नेकपाभित्रको फुट वा विभाजनको सन्दर्भमा ओली पक्षलाई नै हामीले मुख्य जिम्मेवार ठह¥याएका छौ“ । किनभने त्यसले आफ्नो संगठनभित्रको विधिगत प्रक्रिया वा बहुमतको निर्णयलाई समेत नमान्ने घोषणा गरेर आफ्नो पदको रक्षाको लागि संसदलाई समेत विघटन गरेको छ र त्यसरी देशलाई गम्भिर संकटको मुखमा धकेलेको छ । त्यो अवस्थामा त्यसका विरुद्ध संघर्षमा उत्रने प्रचण्ड पक्ष, नेका र मधेशवादी तथा विभिन्न नागरिक समूहहरुलाई पनि समर्थन वा उनीहरुको आन्दोलनसित सम्भव भएसम्म कोर्डिनेशन गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।
भारतीय शासकवर्गहरूको नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने नीतिलाई हामीले विरोध गर्दछौ“ । तर राजावादीहरूले भारतको त्यसप्रकारको भूमिकालाई स्वागत गर्दै आएका छन् र गर्ने छन् । ओली सरकारले नेपालप्रतिको अमेरिकाको एमसीसीको नीतिलाई समर्थन गरेको छ । तर हामीले अमेरिकाको त्यो नीतिको विरोध गरेका छौ“ । मधेशवादीहरूले तराई वा संविधानप्रतिको भारतको नीतिको स्वागत गरिरहेका छन् । तर हामीले त्यसको विरोध गरिरहेका छौ“ । त्यही कुरा नेपालप्रतिको चीनको नीतिको सन्दर्भमा पनि सत्य हो । त्यस बारेमा पनि नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले आ(आफ्ना दृष्टिकोण अनुसार चीनको भूमिकाको समर्थन वा विरोध गर्ने कुरा प्रस्ट छ ।
नेकपाभित्र देखापरेका विवादप्रति चीन र भारतले सुरुदेखि नै चासो राख्ने गरेका छन् । त्यो क्रम अहिले पनि कायम छ । केही समय पहिले भारतबाट आएका ‘रअ’ प्रमुख, प्रधानसेनापति र विदेश सचिव समेतको यात्राको उद्देश्य नेकपाभित्रको विवादलाई आफ्ना पक्षमा उपयोग गर्न भएको कुरा प्रस्ट छ । त्यही प्रकारले केही पहिले चीनका प्रधानसेनापति र अहिले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणको उद्देश्य पनि नेकपाभित्रको विवादसित नै सम्बन्धित भएको कुरा प्रस्ट छ । तर ती दुवै पक्षहरूका उद्देश्य के हुन् र उनीहरूका ती उद्देश्यले नेपालको राष्ट्रिय हितस“ग कति मेल खान्छ वा खान्न त्यो मुख्य विचारणीय कुरा हो । चीन र भारतका साथै अमेरिकाको कुटनीतिले पनि नेपालको राजनीति वा नेकपाभित्रको विवादलाई प्रभावित पार्न खोजेको कुरा पनि प्रस्ट छ ।
नेकपाको विवादबारे चीन र भारतले अपनाएका नीतिलाई खाली विदेशी शक्तिहरूको चलखेल भनेर ती दुबैलाई समान प्रकारले हेर्नु सही हुने छैन । चीन र भारत दुवै साम्राज्यवादी देशहरू हुन् । ती दुबैका नेपालप्रति आफ्ना आफ्ना प्रकारका स्वार्थहरु छन् । तर कतिपय अवस्थामा विभिन्न साम्राज्यवादी देश वा प्रतिक्रियवादी शक्तिहरुप्रति पनि कुनै खास बेलाको स्थिति वा राजनीतिक आवश्यकता अनुसार बेग्लाबेग्लै नीतिहरु अपनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो क्याम्पमा सामेल गर्न चाहन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति जुन हदसम्म असंलग्न छ, त्यसबाट त्यसको (अमेरिकाको) साम्राज्यवादी नीतिमा धेरै वाधा पुगेको छ । अमेरिकाको उद्देश्य हो, प्रथम, नेपाललाई तिब्बती नीति, जसको मुख्य उद्देश्य हो तिब्बतमा दलाई लामाको पुनस्र्थापनाका पक्षमा ल्याउनु । द्वितीय, एमसीसीको माध्यमद्वारा नेपालालाई इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत ल्याउनु र त्यसरी चीनका विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा नेपाललाई पनि सामेल गराउनु । तिब्बतको विषयमा ओली सरकारले अमेरिकाको नीतिलाई समर्थन गरेको छैन । तर एमसीसीको पक्षमा उसले खुलेर नै आफ्नो विचार प्रकट गरेको छ र त्यसलाई लागू गराउन पुरा जोड दिने गर्दै आएको छ । एकपल्ट नेपाल इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत आयो भने तिब्बतबारे त्यसले ९नेपालले० अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि अर्थहीन हुने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा अमेरिकाले ओली सरकारलाई कसरी प्रभावित गर्न खोजिरहेको छ रु प्रकट रूपमा त्यो जानकारी बाहिर आएको छैन । तैपनि यो अनुमान गर्न मुस्किल पर्दैन कि त्यसले (अमेरिकाले) खाली नेपाललाई इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउन मात्र होइन कि तिब्बत सम्बन्धी नीतिबाट पनि पछाडि हट्न पुरा दवाव दिने छ वा दिइरहने छ । यदि नेपाल इण्डोप्यासिफिक रणनीति वा एमसीसीको पक्षमा गयो भने नेपाल अमेरिकाको सैनिक अखडा वा शीत युद्धको केन्द्र बन्ने कुरा प्रस्ट छ । ओली सरकारका नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि ओली सरकार एमसीसीलाई लागू गराउन पुरै लागेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
नेकपाको विवादबारे चीन र भारतले अपनाएका नीतिलाई खाली विदेशी शक्तिहरूको चलखेल भनेर ती दुबैलाई समान प्रकारले हेर्नु सही हुने छैन । चीन र भारत दुवै साम्राज्यवादी देशहरू हुन् । ती दुबैका नेपालप्रति आफ्ना आफ्ना प्रकारका स्वार्थहरु छन् । तर कतिपय अवस्थामा विभिन्न साम्राज्यवादी देश वा प्रतिक्रियवादी शक्तिहरुप्रति पनि कुनै खास बेलाको स्थिति वा राजनीतिक आवश्यकता अनुसार बेग्लाबेग्लै नीतिहरु अपनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । स्टालिनले फासिस्ट जर्मनीका विरुद्ध अमेरिका, व्रिटेन र फ्रान्ससित गरेका एकता, माओले जापानका विरुद्ध च्याङ्काईशेकसित गरेको संयुक्त मोर्चा वा नेपालमा राजा र काँग्रेस दुबैको वर्गीय आधार एउटै भएको र उनीहरु दुबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु भएपनि बेग्लाबेग्लै समयमा हामीले उनीहरु९नेका० सित गरेको कार्यगत एकता, सहकार्य वा कोर्डिनेशनको नीतिले त्यही कुरा बताउँछ ।
नेकपाभित्रको विवादलाई चीन र भारत दुवैले आफ्नो आफ्नो प्रकारले प्रभावित गर्न खोजिरहेका छन् । तर ती दुवैको उद्देश्यमा मौलिक प्रकारको अन्तर छ । भारतले नेकपामा फुट पारेर तिनीहरू मध्ये एउटा पक्षलाई आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थको पक्षमा लैजान चाहन्छ । पहिले एमाले र प्रचण्डको संयुक्त सरकार भएको बेलामा त्यसले (भारतले) प्रचण्डलाई फुटाएर ओली सरकारलाई अपदस्थ गराउने काम गरेको थियो भने अहिले ओली पक्षको भय दोहन गरेर त्यसलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
नेकपाभित्रको विवाद अब त्यसको खाली आन्तरिक विषय मात्र बन्न गएको छैन । त्यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय त पहिले नै भएको थियो अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूका बिचमा द्वन्द्वको विषय पनि बन्नपुगेको छ । त्यो द्वन्द्वलाई हामीले अमूर्त रूपले होइन, देशको ठोस परिस्थितिका सन्दर्भमा नै बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । यदि त्यो द्वन्द्वमा अमेरिकी वा भारतको पक्ष जति भारी हु“दै जानेछ, त्यति नै त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध हुने छ ।
नेकपाको विवादको सन्दर्भमा चीनले पहिलेदेखि नै जुन प्रकारको नीति अपनाउ“दै आएको थियो, त्यसको सकारात्मक महत्व छ । त्यसले बारम्बार नेकपाभित्र एकता कायम गर्न प्रयत्न गर्दै आएको थियो । नेकपाभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको बेलामा पनि चिनिया“ राजदूतले उनीहरूका बिचमा एकता कायम गराउन प्रयत्न गरेकी थिइन् । तर परिणामले बतायो, चीनको तुलनामा भारतको प्रभाव बढी भयो र अन्तमा नेकपा फुट्यो । शायद त्यसको पछाडिको कारण यो हो कि ओलीले अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादको पक्षको आड लिदा नै आफूलाई बढी फाइदा देखे । त्यसप्रकारको धेरै नै बिग्रिसकेको अवस्थामा पनि नेकपामा एकताका लागि थप प्रयत्न गर्न उच्चस्तरीय चिनिया“ प्रतिनिधिमण्डल अहिले नेपालमा आएको छ । तर के त्यसको मिशन सफल हुनेछ ? अहिलेसम्मको स्थितिमाथि विचार गर्दा त्यसको सम्भावना कमै देखिन्छ । ओली र उनको सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादका पक्षमा यति धेरै अगाडि बढेका छन् कि अब उनलाई त्यहा“बाट फर्कने सम्भावना कमै छ । तैपनि चीनको प्रयत्न सफल हुन्छ भने त्यो खाली नेकपाका लागि मात्रै होइन, देशका लागि पनि स्वागतयोग्य र सकारात्मक महत्वको कुरा हुनेछ ।
नेकपाभित्रको विवाद अब त्यसको खाली आन्तरिक विषय मात्र बन्न गएको छैन । त्यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय त पहिले नै भएको थियो अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूका बिचमा द्वन्द्वको विषय पनि बन्नपुगेको छ । त्यो द्वन्द्वलाई हामीले अमूर्त रूपले होइन, देशको ठोस परिस्थितिका सन्दर्भमा नै बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । यदि त्यो द्वन्द्वमा अमेरिकी वा भारतको पक्ष जति भारी हु“दै जानेछ, त्यति नै त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध हुने छ । अर्कातिर, चीनको नीति वा भूमिका जति सफल हुँदै जानेछ, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुने छ । तर त्यो द्वन्द्वमा निर्णयात्मक भूमिका नेपाली जनताको नै हुने छ वा हुनुपर्दछ । साभारः युगदर्शन डटकमबाट